भुकम्प गएको तीन बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि लमजुङका भुकम्प पीडितहरुको अवस्था दयनीय
ईलमपोखरी पुस ११
भुकम्प गएको तीन बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि लमजुङका भुकम्प पीडितहरुको अवस्था दयनीय छ । अघिल्लो बर्षको हिउँद मुश्किलले कटाएका उनीहरुलाई यो हिउँद त आनन्दले पक्की घरमा कटाउने आशा र रहर थियो । तर यसो हुन सकेन । यो हिउँद पनि उनीहरु कच्ची टहरोमै विताउँदै छन् ।
भुकम्पले घर लडेपछि त्रिपालमा ओत लागेका भुकम्प पीडितहरु अहिल े जस्ताको सानो टहरामा दिनरात गुजार्दैछन् । चिसो हावा, शित र तुषारोसंग संघर्ष गर्नुपर्दा भुकम्प पीडितहरुको स्थिति दयनीय बनेको छ । दूधपोखरी गाउँ पालिकाको वडा नं. ३ इलमपोखरीका मंगले तामाङ भन्नुहुन्छ– ‘निकै चिसो छ यहाँ ‘रातभरी शित पर्छ, ओढ्ने कपडा त पानीले भिजेजस्तै हुन्छ । कसरी यो हिउँद कटाउने हो ? सम्झदा पनि अत्यास लाग्छ ।’
२०७२ बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भुकम्पले पूर्वी लमजुङमा अत्याधिक क्षति पुगेको थियो । ईलमपोखरी ठुलोकाभ्रेका मंगले जस्तै त्यहाँका अधिकांश भुकम्प पीडितहरुलाई यो चिसो र कठ्यांग्रिदो हिउँद कसरी कटाउने भन्ने चिन्ता छ । अधिकांश भुकम्प पीडितहरु गरिबीको रेखामुनी भएकाले पनि थप समस्या परेको छ । पर्यप्त न्यानो कपडाको समेत जोहो गर्न कतिले सकेका छैनन् । जस्ता र त्रिपालले छेकेको भरमा चिसो भगाउन मुश्किल परेको छ उनीहरुलाई । वयस्कहरुले त जेनतेन जाडो सहे पनि बुढाबुढी र केटाकेटीहरुलाई निकै समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले पक्की घर बनाउन दिएको अनुदान रकम थोरै भएकाले समस्या परेको उनीहरुको गुनासो छ । पहिलो किस्तामा दिएको ५० हजार रुपैयाँले घरको जग खन्नैमा नपुगेको उनीहरुको गुनासो छ । दोस्रो किस्ता पाउनका लागि प्राविधिकले सिफारिस गर्नु पर्ने सुनेका उनीहरुकहाँ अहिलेसम्म प्राविधिक पुगेका छैनन् ।पूर्वी लमजुङका दूधपोखरी, इलमपोखरी, बिचौर, भलायखर्क, चक्रतीर्थ, गौंडा, प्यारजुङ, कोल्की, पाचोक, नौथर, ढोडेनी, फलेनी, श्रीमञ्ज्याङ, धमिलीकुवा, तार्कुघाट, मोहोरियाकोट लगायतका गाउँमा पनि स्थानीयका यस्तै समस्या छन् । अधिकांश गाउँलेले पहिलो चरणको ५० हजार पाइसकेका छन् । सरकारले बैंकमार्फत उनीहरुलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार पठाइसकेको छ । तर दोस्रो किस्ता कहिले आउने भन्ने अन्यौल हुँदा उनीहरुले बनाउन लागेको घर कहिले ठडिने हो भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
सरकारले अब आउने बर्षायामसम्म भुकम्प पीडितहरुले घर बनाइसक्ने बताए पनि अहिलेकै अवस्थामा भुकम्प पीडितले नयाँ घर बर्षा अघि नै पाउलान भनि शंका गर्नपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।
← विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बने : गुरुङ
सिभिलको नया शाखा भुलुभले बजारमाखुल्यो →